Ezona mveliso zinomdla kwaye zinqabile eziye zabonwa kwi-CES 2020 | Iindaba zeGajethi
Ezona mveliso zinomdla zinikwe i-CES 2020
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi
Umboniso wonyaka we-CES eLas Vegas uphelile, kodwa ukubala ukuya kwi-MWC kuyaqala. Kude kube lelo xesha kufuneka senze uphononongo lolona qhankqalazo luchazwe kulo mboniso, Ezinye zazo zinokuhlelwa kunokuba zibe ziikhonsepthi, kodwa ezinye ukuba zinokubakho ngexeshana elifutshane.
Umboniso obubanjelwe eLas Vegas ubonakaliswe ngokubonisa ii-fantasies ezingaphezulu kwezinto eziyinyani, jonga nje ukuba uninzi lwezinto esazibona kunyaka ophelileyo azikakhululwa, nkqu uninzi lwazo zithiwe thaca ngo-2018. Kodwa siza kubona eyona inomdla okanye aziwayo esiyibonileyo ngo-2020.
1 UMBONO-S Imoto yombane uSony
2 I-OnePlus Concept Inye
3 I-RollBot, irobhothi ifuna iphepha langasese
4 Crave Lora DiCarlo isidlidlizi
5 Umabonwakude we-LG OLED48CX
6 I-Samsung Q950TS QLED 8K
7 ILenovo YoGa 5G
8 Uhlobo lweSelfieType
UMBONO-S Imoto yombane uSony
Enye yezimanga zolu lungelelwaniso kukuvela kukaSony ngemoto yombane. Isithuthi esithwele iteknoloji ngokwe ukuqhuba ngokuzimelaUyilo lwekamva eliqaqambileyo, ii-sensors ezingama-33, iaudiyo ezingama-360º, unxibelelwano olupheleleyo kunye 540hp yamandla.
I-Sony VISION-S sisaloon sombane esivela 4,89 yeemitha ubude, nge 1,9 yeemitha ububanzi kunye ne-1,45 ukuphakama, ngemfazwe yeemitha ezintathu kunye nendawo ye abakhweli abane ngezihlalo ezizodwa. Yenziwe kwiqonga elithile leemodyuli elenziwe nguMagna, elinye lamaqabane aliqela u-Sony abhekisele kulo moto.
Ifemu yaseJapan ikwanazo neenkampani ezinje ngeBosch, Continental, Nvidia okanye iQualcomm kwizinto ezahlukeneyo zesithuthi. Iimoto ezimbini zombane ezingama-200 kW nganye, zibonelela nge-540 hp amandla iyonke. UMBONO-S unamavili onke. Akukho zinkcukacha malunga nebhetri okanye ukuzimela, nangona kunjalo U-Sony uthi imoto yayo yombane inobunzima obungama-2.350 eekhilo.
Kwinkampani efana no-Sony, ukudityaniswa kwezinto zobuchwephesha zikarhulumente ezibandakanya isithuthi kunzima kakhulu, ukusuka Iimpawu ezi-5 zedashboard ezixelisa isikrini esibanzi esiphezulu, kwinkqubo yesithethi eyakhelwe kwizihlalo ezibonelela ngamava omsindo wokuntywila obandakanya abagibeli kwaye uhambise isandi esiziidigri ezingama-360.
USony akenzanga naluphi na uhlobo lwesiteyitimenti malunga nenjongo yokubeka esi sithuthi kwintengiso, ke Kubonakala ngathi ngumzekelo wokubonisa abavelisi ukuba iTesLa yeyiphi indlela.
I-OnePlus Concept Inye
I-OnePlus, yenye yezona zinto zaziwayo zaseTshayina e-China, khange iveze nasiphi na isiphelo sendlela kumboniso waseLas Vegas kodwa ibonakalisile iprototype ukuba nangona akubonakali ngathi iya kukhutshwa ngexeshana elifutshane.
Ukuba sijonga umphambili kunokubonakala ngathi sifumana iprojekti ye-OnePlus 7T, okubalulekileyo kuthi kule meko kukuphambuka kwesiphelo, sifumana ukugqitywa kwesikhumba kunye inkqubo yekhamera engabonakaliyo. Ukuba umbulelo ongabonakaliyo kwiglasi ekhethekileyo, eyaziwa ngokuba yi-electrochromic efihla iilensi ngelixa isicelo sekhamera singavulekanga. Ayisiyiyo indlela, ukuba ayisiyiyo inkqubo yeempembelelo zombane tshintsha iglasi ukusuka kwi-opaque ukuya kwi-translucent Kwaye kungenjalo, enkosi kuthotho lwamasuntswana ezinto eziphilayo asabela kolu khuthazo.
I-RollBot, irobhothi ifuna iphepha langasese
Ingabonakala ngathi iyadlala kodwa iyinyani, kwaye kwabanye abantu abahlala bodwa inokuba lusindiso ukuphuma ezingxakini, okanye intuthuzelo kwabo badideke ngakumbi. Ngokuqinisekileyo ukhe waphela kwiphepha langasese kwigumbi lokuhlambela, le robhothi inokukunceda. Ithiyiwe Iroli kwaye ibonisiwe kule CES 2020 yinkampani yaseMelika Iprocter kunye neGamble.
I-Rollbot yenzelwe kwaye yahlelwa ukuthatha iphepha naphi na apho ukhoyo, zombini kwiindawo zikawonke-wonke nakumakhaya abantu. Indawo yayo inokulawulwa ngeselula, ukuze kube nakho ukumbiza xa kufanelekile.
Crave Lora DiCarlo isidlidlizi
Itekhnoloji ibikhona kumawaka eemveliso zesini kwihlabathi liphela amashumi eminyaka. Kodwa umbutho we I-CES ithathe ngaphezulu kweminyaka engama-50 ukuvumela olu hlobo lwesixhobo ukuba luboniswe kwindawo efanelekileyo.
Kunyaka ophelileyo kwavela impikiswano malunga neerobhothi zeOsé Robotic Massager, eziphuhliswe yinkampani yaseLora UDiCarlo, uphumelele enye yeembasa ezintsha ze-CES. Kodwa kwakamsinya emva kokuba isusiwe. Imithetho yatsho ukuba Iimveliso ezithathwa ngokuba "aziphethe kakuhle, amanyala, amanyala nezingcolileyo" bezingakulungelanga ukufumana amabhaso. Kwiinyanga ezimbalwa kamva ngenxa yengxabano eyavela, umbutho ubuyisele ibhaso kwiDiCarlo.
Njengoko bekulindelwe enye yezona mveliso zinempikiswano kunyaka ophelileyo, ibizakuba yeyona ilindelwe kakhulu. Abantu basenentloni ukuthetha ngalo mbandela, kodwa impilo yezesondo iyinxalenye yobomi bethu kwaye ezi ntlobo zamanqaku zinokusinceda sizive ngcono kwaye sinoxinzelelo oluncinci.
Crave yi-jewel vibrator, isacholo esihonjiswe nge-vibrator encinci eyenziwe ngentsimbi engenasici, inokuhlawuliswa ngentambo ye-USB kwaye eyona nto iphambili kukuba ifuna ukuba abantu bangazibeki ecaleni iithoyi zabo zesini ngehlazo.
Umabonwakude we-LG OLED48CX
Kude kube namhlanje, ukuba sifuna i-oled tv besingenakho ukhetho ngaphandle kokuthenga iphaneli enobubanzi obuyi-intshi ezingama-55, oku kube yingxaki ukuba into esiyifunayo umabonakude kwigumbi lokulala, kulo nyaka i-LG ikwathabatha umgangatho womfanekiso ongenakuthelekiswa nanto we-LG's OLED TV kwisayizi entsha yesikrini: ii-intshi ezingama-48. Iyunithi ye-4K UHD (imodeli i-OLED48CX) ivelisa nomgangatho obukhali ngakumbi womfanekiso nge ngaphezulu kwesibhozo seepikseli kwiscreen se-intshi ezingama-8, Ukuxinana xa kuthelekiswa ne-TV engama-8 ye-96K yeTV.
Q950TS QLED 8K kwiSams
Yeyokuqala yeTV ye-8k ukudibanisa uyilo olunomtsalane kunye nokutsala amehlo, umgangatho we-8k wePremiyamu kunye nomtsalane isandi esingqonge. Loomabonwakude unento ebizwa ngokuba yi-'infinity screen 'oko kuthetha ukuba 99% umphambili wenziwe kwiscreen.
Le TV ixhotyiswe nge- Iprosesa ye-8K yeQuantum AI, inezixhobo ze-8K AI ezinokuthi ngokuzenzekelayo zilinganise umxholo ongekho-8K kwisisombululo "esiyinyani" se-8K. Ngomxholo obizwa ngokuba yi-Adaptive Picture, unokwandisa isikrini kwisimo seemeko. Kwaye iprosesa ye-AI yeQuantum, umthombo wamandla ogunyazisa umboniso, uyanceda ukuqhuba Iqonga lasekhaya lakwaSamsung, iTizen, eyenza abasebenzisi ukuba bafumane yonke into ukusuka kumgangatho ophuculweyo womfanekiso ukuya kuluncedo olukhulu lweempawu zayo ezikrelekrele.
Ukuba kuyo yonke le teknoloji songeza inkqubela phambili yamva kwisandi esenziwe yi-Samsung I-Q-Symphony, i-Object Tracking Sound + (OTS +) kunye neAmplifier yeZwi eSebenzayo. Ezi mpawu zandisa isandi esingqonge, ukuhambisa isandi esiguqukayo esihambelana namava amakhulu okubukela kwiscreen.
ILenovo YoGa 5G
I-Lenovo Yoga 5G ilaptop eguquguqukayo engasindi kwaye iza neprosesa entsha ye-SnapDragon 8cx 5G izakusebenza Windows 10 kwi-ARM. Owona mfanekiso mhle uya kubonelelwa nge-14 ”ye-HD epheleleyo yescreen sokuchukumisa esinama-400 amasuntswana okukhanya kunye neAdreno 680 GPU.
Kwicandelo lesandi sinezithethi zestereo kunye netekhnoloji yeDolby Atmos kunye negalelo le3.5mm kwii-headphone. Sikwanamazibuko amabini e-usb c kunye nenye slot ukwazisa iMicrosoft Sim yoqhagamshelo lwe5G nangona sinokusebenzisa i-sim Esim ebonakalayo Ukuba umqhubi wethu unayo, oku kuya kubonelela ngesi sixhobo ngesantya se Unxibelelwano luphezulu kakhulu kune-4G yangoku.
Ukongeza koku, sinamacandelo afana nekhamera ye-infrared kunye nefayile ye umfundi odityanisiweyo weminwe. Sinesoftware enikezelwe kummiselo wobushushu, ukulungelelanisa ukusebenza ngokusekwe kwintsebenzo esiyenzayo ngalo lonke ixesha, siyivumela ukuba igcinwe kwindawo ubushushu obulungileyo. Ine-8 GB ye-RAM kunye ne-265 GB / 512 GB yokugcina, kunye nebhetri efikelela kwiiyure ezingama-24 zokuzimela kwityala elinye.
Isamsung yazisa ikhibhodi engabonakaliyo eya kusivumela chwetheza nakweyiphi na indawo enkosi kwi-AI yayo. Esiqhelekileyo xa sisebenzisa ithebhulethi okanye i-smartphone Kukubonisa ikhibhodi ekwisikrini kwaye uchwetheze ukuba uthayiphe, kodwa kuthekani ukuba, endaweni yoko, sinokuvula ikhibhodi engabonakaliyo kuyo nayiphi na itafile ngokungathi yibhodi yezitshixo ebonakalayo? Ewe, yile nto umbono we-Samsung ngale teknoloji imalunga.
I-SelfieType ifuna ukuba sibe ne-smartphone okanye ithebhulethi etafileni, ngokungathi sisibek 'esweni nangobukrelekrele bokwenyani bokwenene kwikhamera yangaphambili yesixhobo sethu ukuhlalutya ukuhamba kweminwe yethu ukuze sinxibelelanise into esifuna ukuyibhala. Asizukubona nantoni na eqikelelweyo njalo asizokwazi ukubona naziphi na izitshixo okanye uncedo lokuchwetheza.
Okwangoku oku yingcinga nje, Ke ngoko, asizukuyibona iphunyezwa nakweyiphi na indawo yorhwebo. Ngenxa yokuntsonkotha kokuchwetheza ngokungaboni kwaye i-AI iya kujongana nokwazi oko sikubhalayo, ndiyathandabuza ukuba siyakubona oku kwixesha elifutshane, Kodwa ayisiyongqondo iphambeneyo kwaye kunokwenzeka ngenye imini siyakuphela siyibona iphunyezwa kokubini kwizixhobo zethu eziphathwayo, Kunye nakwithebhulethi yethu okanye kwi-smartTV
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezona mveliso zinomdla zinikwe i-CES 2020
Fumana iRealme X2 Pro ngexabiso eliphantsi kunangaphambili